ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ အားလုံးပါဝင်သော စုံညီခုံရုံးသည် ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌ ရုံးထိုင်၍ တရားမအထူးအယူခံမှု (၁၇) မှုကို စီရင်ချက် ချမှတ်သည်။ ထို့ပြင် ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၃) မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှု (၂)မှု တို့ကို ကြားနာခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
“ Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and Judicial Officials” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် UNDP တို့ ပူးပေါင်း၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အစီအစဉ်ဖြင့် တရားရေးအရာရှိများအတွက် မျှတသောတရားစီရင်ရေးစံနှုန်းများ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စစ်တွေမြို့၊ စစ်တွေဟိုတယ်၌ ယနေ့နံနက် (၀၈:၃၀)နာရီအချိန်တွင်ကျင်းပရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကျောက်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး UNDP မှ U Tun Tun (Area Office Coordinator)က ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
Read more about “ Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and Judicial Officials” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ လေ့ကျင့်ဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျေင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် (ကိုယ်စား) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးဝင်းဆွေ တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်း အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Read more about ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. John Nielsen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. John Nielsen အား ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. John Nielsen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
“ Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and Judicial Officals ” ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
Read more about “ Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and Judicial Officals ” ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
Workshop on Fair Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Court Staffs အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကျင်းပ
Read more about Workshop on Fair Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Court Staffs အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကျင်းပ
မကွေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်
မကွေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ(၈၁) ဦးပါဝင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လာရောက်လေ့လာကြပါသည်။
Read more about မကွေးတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ၊ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်အောင်နှင့် ဦးခင်မောင်ကြည်တို့ပါဝင်သည့် အပြီးသတ်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီ အချိန်၌ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) တွင် ရုံးထိုင်ပြီး တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှု (စာချွန်တော်) (၆) မှုကို စီရင်ချက်ချမှတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တရားမအထွေထွေလျှာက်ထားမှု (စာချွန်တော်) (၄) မှုတို့ကို ရုံးထိုင်ကြားနာခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး " ၁၀ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေဖိုရမ် " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ဗလာဒီဗိုစတုတ်မြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြု လုပ်သည့် " ၁၀ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေဖိုရမ် (10th Asia-Pacific International Legal Forum) " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး " ၁၀ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေဖိုရမ် " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး “(၁၀) ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဖိုရမ်” သို့ တက်ရောက်ရန် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ဗလာဒီဗိုစတုတ်မြို့သို့ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ဗလာဒီဗိုစတုတ်မြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် “(၁၀) ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေဖိုရမ် (10th Asia-Pacific International Legal Forum)” သို့ တက်ရောက်ရန် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ ယမန်နေ့ညပိုင်းက ထွက်ခွာသွားသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး “(၁၀) ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဖိုရမ်” သို့ တက်ရောက်ရန် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ဗလာဒီဗိုစတုတ်မြို့သို့ထွက်ခွာ
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရုံးခန်းအမှတ် ၂ တွင် ယနေ့ နံနက် (၀၈း၃၀) အချိန်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီး ဦးစိုးနိုင်က အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသော...
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) တို့ပူးပေါင်း၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သက်သေခံအထောက်အထား အမျိုးအစားအသစ်များကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် တရားရုံးက ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေးစနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) တို့ ပူးပေါင်း၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သက်သေခံအထောက်အထား အမျိုးအစားအသစ်များကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် တရားရုံးက ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရေး စနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို...